INOGONA-SPAM ichashanduka riini email? | Martech Zone
Muvhuro, September 18, 2006 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Iyo FTC yavhara mashoma mashoma spammers nguva pfupi yadarika. Spam ichiri nyaya hombe, ini ndinowana mazana emameseji pazuva. Ini ndaigona kusefa maemail (ini ndaiwanzoshandisa MailWasher) asi ndikasiya. Kune dzimwe nzira - kushandisa SPAM sevhisi inoda kuti munhu wega wega apihwe mvumo yekunditumira email, asi ini ndinofarira kuwanikwa.
Zvino dambudziko rapararira. Ini ndinowana Comment uye Trackback Spam pane yangu blog. Mazuva ese, ini ndinopinda uye kune mishanu kune gumi meseji iyo Akismet isina kubata. Hapana mhosva yavo - yavo sevhisi yakabata pamusoro pe5 makomendi SPAMs pane yangu blog.
FTC inozobatana riini nemamwe marudzi eSPAM parutivi neemail? Ini ndinofunga muenzanisiro mukuru ndeuyu… Ini ndinotenga chitoro mumugwagwa mukuru une yakawanda traffic. Pandinongopinda mukati uye shopu yeSSPAM pasi pemugwagwa inondiwana, vanoda kutora vamwe vevatengi vangu. Saka - vanonamira zvikwangwani pahwindo rechitoro changu vachishambadzira chitoro chavo. Havandibvunze mvumo - vanongo zviita.
Zvakafanana nemumwe munhu akaturika posita kumberi kwangu kwechitoro achishambadzira chitoro chake. Nei zvisiri pamutemo?
Munyika chaiye, ini ndaizokwanisa kumisa izvi. Ini ndaigona kukumbira munhu kuti amire, nditore mapurisa kuti avabvunze kuti vamire, kana pakupedzisira ndaigona kuvamhan'arira kana kupomera mhosva. Zvisinei, paInternet, handikwanise kuzviita. Ndinoziva kero yeASAMUTSI… Ndinoziva dura rake (Kwaanogara). Sei ndisingakwanise kumuvhara? Zvinoita sekunge kwandiri kuti isu tinofanirwa kupihwa zvakafanana mhosva nezviito zveveruzhinji zvatakapihwa dai nzvimbo yangu yekumberi (blog) yanga iri kero chaiyo yemugwagwa.
Yenguva yekuwedzera mutemo uye kuisa imwe tekinoroji kumashure kwemitemo iyi. Ini ndinofunga SPAMMER IP's inofanirwa kuvharirwa pane inoenderera kubva kumazita maseva pasirese. Kana vanhu vakatadza kusvika kwavari, ivo vaimira.
Tags: anogona-spameemail mutemoftcspam murau
Window Hondo… Nzvimbo, Nzvimbo, Nzvimbo